Indawo yokuhlala elunxwemeni eMulah, eMaldives
Mulah, Central Province, Maldives
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguRoashanee
Ngaba ujonge i-surf engenabantu abaninzi? Ewe, luhambo olufutshane ukuya kumakhefu amabini asekunene okanye uhambo olukhawulezayo lokuhamba ngesikhephe ukunqumla isitishi ukuya kwi-F1's kunye nezinye iikhefu zokuzama, uya kubafumana abaqhubi basekhaya banobuhlobo kwaye bamkelekile. Indawo yokuhlala ikwisiqithi sokuloba saseMulah esinolwandle oluhle & olucocekileyo olujikeleze isiqithi indawo yayo entle yokuntywila ngeentlanzi ezininzi kunye nofudo lokubonwa. Okanye ukuba ukhetha ukuhlala kwi-wharf kunye nentlanzi okanye ulungelelanise isikhephe kwaye uhambe ukuloba ngeentlanzi ezahlukeneyo zomdlalo.
Ixabiso elisisiseko lelegumbi elinye kuphela labantu ababini kunye nezibonelelo zokwenza isidlo sakusasa sakho (iCereal).
Isidlo sakusasa esiphekiweyo, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa. (okanye kuphekwe nje isidlo sangokuhlwa kwaye utye i-noodles yemizuzu emi-2 ngesidlo sasemini okanye ufumane amava ekhefi zasekhaya xa zivuliwe)
Ikhefu ezibini kumgama wokuhamba okanye sinokulungiselela isikhephe ukuba siqhawule imijelo.
Ukuhanjiswa kwenqanawa ngesantya ukusuka kwiNdoda ukuya eMula ukuya kwiNdoda.
Amagumbi anemigangatho yangoku ene-air-conditioning yenkqubo yokwahlulahlula, anokumiselwa isibini okanye iibhedi ezimbini zabakhenkethi abahambahambayo kunye neentlanzi.
Kukho kusasa (8am) isikhephe esihamba ngesantya esifumanekayo sisuka kwiNdoda nge- $35 USD ngomntu ngamnye ngoMgqibelo, ngoMvulo, ngoLwesibini nangoLwesine okanye emva kwemini qhuba iintsuku ezifanayo $50 USD ngomntu ngamnye. Ukubuyela kwiNdoda lixesha elifanayo kunye neentsuku zeebhegi zebhodi zixabisa ngokufanayo nomntu.
Umrhumo kaRhulumente woLuhlaza (irhafu ye-$3 USD ngomntu ngobusuku nayo kufuneka iqokelelwe)
Imibala yesakhiwo ikhuphisana ngokuchasene nezityalo kwiifoto ezintle.
Umbuki zindwendwe ngu- Roashanee
I’m Adil Would like to meet many friends from different corners of the world. Let’s make an enjoyable trip with interesting memories in the SUNY side of Maldives
Sinokhetho lwesikhokelo se-surf sase-Australia ngexabiso elongezelelweyo nceda uqhagamshelane nexabiso, awufuni nyani ukudibana noSimon e-Australia kwaye unokukuzalisa ngexesha lekhefu.